Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Mampatahotra? Ny sidina Air India A320 avy any Delhi mankany Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Air India A320 miainga ao Kabul mankany Delhi
Ny sidina Air India 243 tamin'ny alahady, niasa tamina Airbus 320, dia tamina sidina iray natokana avy tany Delhi, India, hatrany Kabul renivohitra Afghanistan. Raha teo am-pandehanana ary efa ho avy io sidina mpikambana Star Alliance io dia tratran'ny mpiady taliban izy.
“Ny habakabaka ambonin'i Afghanistan dia nambara fa nakatona, ka tsy misy fiaramanidina afaka miasa ao. Tsy afaka mandeha ihany koa ny sidina any Kabul ”, hoy ny mpitondra tenin'ny Air India.
Omaly, ny sidina Air India Flight 243 niainga avy tany Delhi ho any Kabul tamin'ny 8:50 maraina dia somary nahemotra ny fotoana India rehefa lasa niaraka tamin'ny mpandeha Afghana 40 tao anaty Airbus A320.
Sidina 2 adiny 5 minitra mankany Afghanistan mpifanila vodirindrina aminy. Rehefa avy niampita ny sisintany tamin'ny AI 243 tamin'ny 15 Aogositra ary antenaina hanombohana ny fomba, dia nasaina nitazona sy nanodidina ny 16,000 metatra ny haavon'ny Air India 90 minitra talohan'ny namelana azy hidina.
Indraindray azo ahemotra ny fidinana an-tanety noho ny tsy fahampian'ny fifandraisana amin'ny rivotra any amin'ny habakabaka Afghanistan.
Raha nankalaza ny fetin'ny fahaleovan-tena ny karana ny alahady 15 aogositra lasa teo ny taliban mamorona korontana sy horohoro amin'ny fakana an'i Kabul, renivohitr'i Afghanistan.
Natahotra ny mponin'i Kabul satria nisy ny vaovao fa nanodidina ny tanàna ny Taliban tamin'io andro io. Nandositra ny governemanta Afghana, ary mikorontana ny tanàna.
Air India 243, a Star Alliance sidina tantanan'ny Air India, nitondra ekipazy 6 sy mpandeha 40 avy any Delhi ho any Kabul nefa tsy fantany raha avela hiditra izy ireo na dia tonga tany amin'ny habakabaka Kabul aza. Nasaina nanodidina ny lanitra tsy nisy antony ny fiaramanidina.
Nandritra ny 90 minitra manaraka dia nanodidina ny lanitra ny Air India tamin'ny haavon'ny 16,000 metatra. Ny sidina Air India dia lasa niaraka tamin'ny solika jet fanampiny. Fantatry ny mpanamory fiaramanidina za-draharaha fa mety hisy fahatarana amin'ny fikatsoana noho ny tsy fahaizan'ny seranam-piaramanidina amin'ny habakabaka Kabul indraindray.
Toy ny fiaramanidina India, fiaramanidina vahiny 2 hafa no nanidina tsy nahazo alalana hiditra. Ankoatra ny fananan'ny Taliban ny tanàna, fanamby kely ihany ny fampandehanana fiaramanidina ambonin'ny Kabul.
Matetika ny seranam-piaramanidina Kabul dia mpanamory "be atao sy mankaleo" hoy ny mpanamory. Mandritra io fotoana amin'ny taona io, ny fanidina mankany an-tanàna dia mametraka fanamby fanampiny: mahery ny rivotra ka mifofofofo.
Ny fiaramanidina misy seza 160 dia notarihan'ny kapiteny Aditya Chopra.
Nomena alalana tamin'ny 3 ora sy sasany tolakandro ny fotoana nahazoana ny fiaramanidina.
Tsy fantatr'ireo mpandeha sy ny ekipa anefa fa niharatsy ny toe-draharaha politika tany Kabul. Na dia taorian'ny nidinan'ny fiaramanidina aza, dia tsy nisy na iza na iza tamin'ny mpiasan'ny trondro nandao ny sabungan, izay matetika fahita any Kabul. Rehefa avy niandry adiny iray sy sasany teo ho eo ny sidina Air India dia nitaingina mpandeha 129 ary niainga ho any Delhi indray.
Ny fiaramanidina dia nitondra mpiasan'ny masoivoho any India, tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta Afghan, farafaharatsiny solombavambahoaka Afghan roa, ary mpanolotsaina ambony an'ny filoha teo aloha Ashraf Ghani.
Nilaza ny mpandeha iray fa nahita olona teny amin'ny seranam-piaramanidina Kabul namoy fo izy rehefa te hiala.
Ny alatsinainy dia nanana sidina natokana ho an'ny Kabul avy any Delhi ny Air India tamin'ny 8:50 maraina. Nahemotra ho amin'ny 12:50 hariva izy io ary naato avy eo taorian'ny fanidiana ny habakabaka tao Afghanistan taorian'ny NOTAM - Navoaka ny fampandrenesana ho an'i Airmen, fampandrenesana ofisialy misy fampahalalana momba ny fizotran'ny sidina.
Ny mpandeha sasany tao anaty fiaramanidina dia nitantara fa afaka "mahatsapa ny fihenjanana amin'ny tany" izy ireo, saingy tsy mazava ny anton'izany.
Nisy miaramila nivezivezy teny amin'ny arabe. Nisy koa fidradradradran'ny hetsika habakabaka: fiaramanidina fitaterana miaramila C-17 Globemaster ary helikoptera Chinook no nanidina sy nivoaka.
Ary nahita fiaramanidina sivily an'ny Pakistan (PIA) sy Qatar Airways nijanona teo amin'ny tara.
Ity, angamba, iray amin'ireo sary mampalahelo indrindra hitako #Afghanistan. Vahoaka very hevitra sy ilaozana. Tsy misy masoivohon'ny fanampiana, tsy misy UN, tsy misy governemanta. Tsy misy. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR
- Nicola Careem (@NicolaCareem) Aogositra 16, 2021